FAQ - Shaoxing Baite qabriga maryo Co., Ltd.
waxaan ka heli kartaa tijaabada tixraac?
Isagoo u soo diri-baarka ka mid ah ama la mid ah gacanta loogu talagalay macaamiisha free.New u baahan tahay in ay bixiyaan lacagaha express, soo celin doonto marka meel si tijaabo ah; haddii u baahan tahay saamiga la mid ah sida yourrequired, waxay u baahan yihiin in ay bixiyaan lacag ururinta, marka meel amar ee wax soo saarka badan, lacag this soo celin doonaa.
maalkayga Ilaa goormay ahaan doontaa diyaar u shixnad?
difaan faahfaahinta kala duwani waxay leeyihiin deliver.As kala duwan sida caadiga ah, 15-25 maalmood shaqo.
Inta badan 2000m, waayo, dhar. (Haddaan caddaymaha gaar ah oo dhar)
Sidee ugu dhakhsaha badan baan ka heli karaa quote qiimo?
kolkiiba waxaad ka soo qaadan doonaa, haddii aad dooratid waxyaabaha our, ka dibna soo qaadan qiimaha maalin keliya shaqeeya sida ay tahay aad looga baahan yahay.
T / T ama L / C at hortiisa.
Waa maxay xirxirida?
Waayo, difaan: Mid ka mid ah kitaabkii duudduubnaa ee mid polybag, iyo daboolka ka baxsan Bag ka qaybqaadashada. Sidoo kale couldaccording in dharka aad requirement.For, hal ka mid ah polybag, iyo 20 nooc kasta oo buuxiyey oo ku yaal mid ka mid ah kartoonka. Sidoo kale waayeen sida uu sheegay aad looga baahan yahay.
Sidee si loo xaqiijiyo tayada hor si?
Waxaan kuu soo diri kari lahaa saamiga free taas oo aanu diyaar u ah jeegga. Ama shaybaarka aad noo soo diraya, ka dibna waxaan ka dhigi doonaa muunad counter aad ogolaansho ka hor si.
Sidee si ay u xaliyaan dhibaatooyinka tayo leh ka dib iibka?
(1) Qaado photos of dhibaatooyinka iyo noogu soo diraan.
(2) Qaado videos dhibaatooyinka iyo noogu soo diraan.
(3) dib u soo dir ka difaan dhibaato jireed by express in us.After aan u xaqiijineynaa dhibaatooyinka, sida ay keentay mashiinka, dyeing ama daabacaadda, iwm, saddex maalmood gudahood, waxaan soo jiidi doonaa barnaamij ku qanacsan tahay waayo.